Madaxweynaha Jubbaland & Puntland oo isaga baxay Shirka ka socda Villa Somalia - Awdinle Online
Waxaa weli kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ay Muqdisho uga socdaan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxda Dowlad goboleedyada & Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Kulamada ayaa waxaa sigaar ah looga hadlayaa dhismaha Guddiga doorashada heer Federaal iyo Heer dowlad Goboleed, dhismaha Guddiga Xalinta khilaafaadka jaangoynta waqtiga doorashada iyo waajibaadka Guddiyada la magacaabayo.
Saacadihii la soo dhaafay kulamadii dhacay ayaa xogaha laga helayo waxaa ay sheegayaan in aad looga dooday Arrimaha la xiriira Magacaabista Guddiga doorashada heer feeraal & Heer dowlad Goboleed sidoo kale kulanka ay isaga baxeen Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland.
Wararka la helayo e horudhaca ah ee soo baxaya ayaa waxaa ay sheegayaan in madaxda ay isku raaceen Magacaabista Guddiyo saddex ah, kuwaas oo ka Shaqeynaya arrimaha doorashooyinka.
Madaxda Dowlad goboleedyada ayaa dib ugu laaban doona degaannadooda si ay latashiyo ula soo sameeyeen Bulshada & Xildhibaannada maamulada si ay u soo Magacaabaan Xubnaha dhinacooda ka socda ee Guddiga doorashooyinka.
Previous articleCiidanka DANAB oo degaano kala wareegay Al-Shabaab
Next articleMareykanka oo kordhinaya duqeymaha loo geysto Al-Shabaab
Mahad Salaad oo jawaab deg deg ah siiyay Cumar Filish
Cumar Filish oo Farriin hanjabaad ah u diray musharixiinta shiray
Sheekh Shariif oo walaac ka muujiyay Arrimaha doorashooyinka
Mid kamid ah dowladaha Caalamka oo deynta ka cafiyay Soomaaliya
Ismaaciil Cumar Geele” Waxaan ka qabsi qabaa in ay soo baxaan Baarlamaan ay si dadbadn ula Shaqeeya Al-Shabaab”
Musharixiinta Madaxweynaha oo dalbaday in uu xilka baneeyo Taliyaha NISA
Akhriso:- War-murtiyeed ay soo saareen Musharxiiinta Madaweynaha Soomaaliya